Ambongadiny Chandelier PC-8255L Art fitaratra chandelier fitaratra chandelier mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8255L Art chandelier fitaratra chandelier toetra
Loko: volamena + fotsy + manga
Size: lava 100 / 143cm
Gongzhi: manapaka sy manaikitra
Ampivoary ny atiny miaraka amin'ny Verbier Chandelier, fisongadinana tena izy izay azo ampidirina amin'ny fomba fanaka maoderina na mahazatra. Ity jiro pendant mitambatra ity miaraka amin'ny famaranana nikela sy haingon-trano fitaratra mazava dia tsy vitan'ny fanatanterahana ny fanazavana ny efitrano, fa asa kanto ihany koa. Apetraho eo ambonin'ny latabatra fisakafoanana na eo afovoan'ny efitrano rehetra izy io raha te ho vita tsara tarehy tokoa.
Manazava ny atiny am-bolo miaraka amin'ireo Amazone Chandelier mahafinaritra. Lit na tsy misy jiro, miaraka amin'ny endriny fitaratra fitaratra manjelanjelatra, ity jiro mamirapiratra ity dia hanazava ny toerana rehetra ao an-tranonao. Ny famirapiratra mahitsizoro
Ny kristaly dia mihantona amin'ny ambaratonga samihafa, misambotra ary manafoana ny jiro mba hamoronana lamina manaitra amin'ny faritra manodidina.
Andiana ravin-tsofina mangatsiaka notampohan-tànana no mahatonga ny Novida Chandelier ho teboka lehibe eo amin'ny haingon-tranoo. Ity pendant valindrihana mivadika ity dia toa mahavariana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinao na efitrano fatorianao ary tena velona tokoa rehefa manazava izy. Izy io dia misy mpitazona jiro 9 ary mihantona amin'ny rojo rohy amin'ny famaranana varahina fahagola.
Teo aloha: Chandelier PC300 trano fisakafoanana Nordic fisotroana forona famoronana tsotra
Manaraka: Chandelier PC-8315 Chandelier art art chandelier personal chandelier mpihinana sakafo tsotra
Chandelier 33332 Trano fitaratra mavokely hazavana ...
Chandelier 33310 Palace tsotra kanto famoronana ...
Chandelier 33800 Liozia labozia vita amin'ny labozia ...